DHAMMAPADA ဓမ္မပဒ ပါဠိ မြန်မာ အင်္ဂလိပ်: ၂၂။ နိရယ၀ဂ္ဂ
၂၂။ နိရယ၀ဂ္ဂ Chapter 22
306. The person who speaks lies goes to hell, and the one who has done things said, "I haven't done this" also goes to hell. Both of them, after having passed away, will have to suffer as they sinned against truth.
၃၀၇။ ယုတ်မာသော သဘောရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကို မစောင့်စည်းကုန်သော သင်္ကန်းကို လည်ပင်း၌ပတ်ကြကုန်သော များစွာသော ထိုသူယုတ်မာတို့သည် ယုတ်မာသော မကောင်းမှုတို့ကြောင့် ငရဲသို့ ကျရောက်ရကုန်၏။
၃၀၈။ သီလလည်းမရှိ ကိုယ် နှုတ် နှလုံးကိုလည်း မစောင့်စည်းဘဲ တိုင်းသူပြည်သားတို့ သဒ္ဓါကြည်ဖြူ ပေးလှူအပ် သောဆွမ်းကို စားရခြင်းထက် မီးလျှံကဲ့သို့ ပူလောင်သော သံတွေခဲကို စားရခြင်းက သာ၍ကောင်းမြတ်သေး၏။
၃၁၀။ မကောင်းမှုကိုလည်းရ၏၊ ယုတ်သောလားရာဂတိလည်းရှိ၏၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သော ယောက်ျား၏ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သော မိန်းမနှင့် မွေ့လျော်ပျော်ပါးရခြင်းသည် အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်၏၊ မင်းသည်လည်း ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းပေး၏၊ ထို့ကြောင့်ယောက်ျားသည် သူတစ်ပါးမယားကို မမှီဝဲရာ။
309. The person who is thoughtless takes another man's wife would go through four misfortunes: got sinned, lack of sleep peacefully, disgraced by other people and lastly hell.
310. Getting the sin, and the downward path to hell for the brief pleasure ofafrightened man with frightened woman, the imposition by the King with heavy punishment; therefore let no man think of another man's wife.
၃၁၁။ မကောင်းသဖြင့် ကိုင်အပ်သော သမန်းမြက်သည် ကိုင်သောလက်ကိုသာလျှင် ခွဲရှသကဲ့သို့ မကောင်းသဖြင့် ကျင့်သုံးအပ်သော ရဟန်းအဖြစ်သည် ထိုရဟန်းကိုပင် ငရဲသို့ဆွဲချ၏။
၃၁၂။ လျော့ရဲစွာပြုအပ်သော အမှုကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုသည် လည်းကောင်း၊ ညစ်နွမ်းသော အကျင့်သည် လည်းကောင်း၊ ယုံမှားတွေးတောဖွယ်ဖြစ်သော ရဟန်းအကျင့်သည် လည်းကောင်း အကျိုးမကြီးချေ။
312. For an act carelessly performed, when sacred vows are broken,amonk's life with suspicion and hesitation – these may have no great results.
၃၁၄။ မကောင်းမှုကို မပြုခြင်းသည်မြတ်၏၊ မကောင်းမှုသည် နောင်အခါ ပူပန်စေတတ်၏၊ ကောင်းမှုကို ပြုခြင်းသည်ကား မြတ်၏၊ ယင်းကောင်းမှုကို ပြုခြင်းကြောင့် နောင်တတစ်ဖန် မပူပန်ရ။
၃၁၅။ တိုင်းပြည်အစွန်ဖြစ်သောမြို့ကို အတွင်းအပြင်နှင့်တကွ လုံခြုံစေသကဲ့သို့ ထို့အတူ မိမိကိုယ်ကို အတွင်းအပြင် လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ကုန်လော့၊ သင်တို့ကို ဘုရားပွင့်ခြင်းစသော အခွင့်အခါကောင်းသည် မလွန်ပါစေလင့်၊ အခွင့်အခါကောင်းကို လွန်သူတို့သည် ငရဲ၌ ကျရောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ စိုးရိမ်ကြရကုန်၏။
315. Likeacity on the border is guarded both inside and out, so letaman guard himself. Do not letagood moment with Buddha's Thar tha na (Sasana) slip by, for those who carelessly allow the good opportunity pass by, in the end they have to suffer when born in hell.
၃၁၉။ အပြစ်ကိုအပြစ်ဟု အပြစ်မဟုတ်သည်ကို အပြစ်မဟုတ်ဟု သိကြကုန်သောကြောင့် ကောင်းသောအယူ ရှိကုန်သော သတ္တ၀ါတို့သည် သုဂတိဘ၀သို့ ရောက်ရကုန်၏။
Buddha Dhamma U Lawkanartha at 8:36 AM
Labels: Chapter 22, Dhammapada Chapter